Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Flightsgbọ elu si Almaty na New Delhi na Air Astana ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Air Astana na-enye njikọ maka ndị njem si Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi na Baku.
Air Astana ga-amaliteghachi ụgbọ elu si Almaty gaa New Delhi, isi obodo India, na 16th Disemba 2021, nwere ọrụ atọ kwa izu nke ụgbọ elu Airbus A320 na-arụ.
A na-ahazi ịpụ na Almaty na Tuzdee, Tọzdee na Satọde maka elekere 07:50 wee bịarute. New Delhi na 11:10, jiri ụgbọ elu nloghachi na 12:20 wee bịarute Almaty na 16:40. Oge niile mpaghara, yana oge ụgbọ elu nke awa 3 na nkeji 50 n'akụkụ ọ bụla.
Ikuku Astana na-enye njikọ dị mma maka ndị njem si Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi na Baku.
Achọrọ ozi njem / ntinye
Ndị njem niile na-aga New Delhi gụnyere ụmụaka kwesịrị dejupụta na New Delhi ọdụ ụgbọ elu online form. Ndị njem gafere afọ 5 kwesịrị ibugo nsonaazụ PCR nwere nsonaazụ ọjọọ enwetara n'ime awa 72 tupu ha erute. Tupu ịbanye na ọpụpụ na ọzọ mgbe ọ bịarutere, ndị njem ga-enweta usoro nnwale thermometric. N'ihe gbasara mgbaàmà ọ bụla nke achọpụtara coronavirus, a ga-eziga ndị njem n'ụlọ ọgwụ.
Ndị njem na-enwetaghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nke nwere obere ọgwụ ka achọrọ ka ha mee nnwale COVID-19 ma ha bịarutere ma megharịa ya na njedebe nke ụbọchị iche iche ụlọ. A napụrụ ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke na ule PCR ma ha bịarutere yana kwapụ iche n'ụlọ.